WWDC 2018, ny karatra Fitbit Versa, GPU ao amin'ny Macs sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Toy ny isaky ny alahady, ao amin'ny Mac OS aho dia manolotra ny fanangonana vaovao be mpijery indrindra ao amin'ny bilaoginay. Somary sahirana ihany ity herinandro ity ary tsaho maro no tonga tany La Luz mifandraika amin'ny fampisehoana vokatra vaovao, na ny fahatongavan'i fitaovana toy ny AirPower nampidirina tamin'ny volana septambra ary mbola tsy nahatratra ny tsena.
Na izany aza, mazava fa ity volana ity, na dia tapa-bolana aza no sisa tavela, dia ho volana iray lehibe amin'ny resaka vokatra Apple sy ny vanim-potoana vaovao ho avy. Andao hojerentsika izay vaovao be mpitsidika indrindra amin'ity herinandro ity ao amin'ny bilaoginay.
Ny zava-dehibe indrindra rehetra dia ny Apple, farany, nanao ampahibemaso ny daty nanoratana ny Fihaonambe manan-danja indrindra manerantany, WWDC 2018. Ny fisoratana anarana hangataka ny fidiran'ny mpamorona dia efa misokatra ary ahoana no ahafahany manao izany raha tsy izany, Ity WWDC ity dia hatao amin'ny 4 Jona ka hatramin'ny 8 Jona.
Fitbit manandrana indray miaraka a famantaranandro marani-tsaina modely vaovao. Amin'ity tranga ity, ny vaovao Fitbit Versa famantaranandro manana famolavolana mitovy amin'ny Apple Watch izay tonga manitsaka mba hiezaka hanana toerana eo amin'ny tsena izay fanjanahan'ny paoma manaikitra azy. Fitbit dia nanolotra ny Fitbit Versa vaovao, famantaranandro mifantoka amin'ny angona fahasalamana sy fahasalamana. Ny smartwatch vy maivana dia manasongadina ny fahasalamana mandroso sy ny fanatanjahan-tena toy ny Fanaraha-maso ny tahan'ny fo 24/7, ny fampihetseham-batana amin'ny efijery ary ny fanarahan-maso dingana mandeha ho azy
Tamin'ity herinandro ity dia fantatray ny valin'ny fanadihadiana izay manamarina zavatra iray intuited. Ny marika, na eo aza ny fametrahana tarehimarika momba ny varotra, tsy izany Izy io dia heverin'ny mpampiasa antonony ho iray amin'ireo hita indrindra amin'ny sehatry ny varotra. Ny fanadihadiana dia fantatra amin'ny USA. com ny Ny lazan'ny toetran'i Harris ary ao anatin'izany dia nidina hatramin'ny faha-5 ka hatramin'ny 29 i Apple. Marina fa tsy zavatra manokana ho an'i Apple izy io. Orinasa hafa mampitaha toa an'i Google dia manomboka amin'ny toerana faha-8 ka hatramin'ny faha-28. Manadihady ireto sokajy manaraka ireto izy ireo: andraikitra ara-tsosialy, fahitana ary fitarihana, fahombiazana ara-bola, fiantsoana ara-pientanam-po, tontolon'ny asa ary vokatra sy serivisy.
Ny alatsinainy lasa teo dia namoaka ny Apple beta vaovao an'ny macOS High Sierra. Ao anatin'izany, ankoatry ny zava-baovao hafa, hitantsika fa ny fampiasana karatra sary ivelany, endri-javatra nampanantenain'ny orinasa ho an'ny macOS High Sierra, dia voafetra amin'ny fitaovana miaraka amin'ny ThunderBold 3.
Tsy vao sambany no nahare ity fihaonambe ity bibikely, mitrandraka na tsy fahombiazana amin'ny rafitra fiasa Mac, Browser Safari, iOS ary ny sisa amin'ny OS ankehitriny. Amin'ity tranga ity dia fahitana azo atao izany midira amin'ny Touch Bar amin'ny Mac amin'ny alàlan'ny browser browser.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » WWDC 2018, ny karatra Fitbit Versa, GPU ao amin'ny Macs sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Tiny Player, mpilalao mozika ho an'ny Mac izay tsy mila iTunes